﻿ ‘इटहरीलाई निर्बाध व्यवशाय गर्न सक्ने थलो बनाउने योजना बोकेको छु’ : राजेश खनाल
इटहरीमा हुन लागेको उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीको चुनावको लागि रस्साकस्सी सुरु भइसकेको छ । उम्मेदवारहरु आफ्नो आफ्नो मतक्षेत्रमा पकड जमाउन लागिपरेका छन् । दुई वटा प्यानल बनाएर चुनावी मैदानमा होमिएका छन् । यसै क्रममा राजेश खनालसमेत वाणिज्यतर्फ सदस्यका उम्मेदवार बनेका छन् । इटहरी वितरक संघका महासचिव एवं नेपाल वितरक महासंघको केन्द्रीय सदस्य साथै खनाल ब्रदर्स स्टोरको प्रोप्राइटरसमेत रहेका खनालसँग न्युजलयका लागि सरिता भण्डारीले गरेको कुराकानी :
उल्लासमय तरिकाले चुनावको तयारी भइरहेको छ । बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ७ बजे सम्म भोट माग्ने, बजारमा गएर परिचय गर्ने, व्यवशायीक समस्याहरुको बारेमा बुझ्ने कार्य भइरहेको छ ।
तपाइको व्यवशायीक यात्राको बारेमा बताइदिनुस न
करिब एक दशक अगाडीदेखि मेरो व्यवशायीक यात्रा सुरु गरेको थिएँ । सामान्य एउटा–दुइटा कम्पनीबाट वितरण पेशाबाट सुरु गरेको व्यवसाय अहिले १२–१५ कम्पनीको डिष्ट्रीब्युटर छु । पुर्व पश्चिम, उत्तर, दक्षिणका ३०–३५ किलोमिटरको एरियामा ५०० बढी व्यवशायीहरुसँग निरन्तर रुपमा कारोबार गरिरहेको छु ।
सफल व्यवसायी बन्न के गर्नु पर्ला ?
सफल र असफल व्यवशायी भन्ने कुरा अरुले मुल्याङ्कन गर्ने हो । तर पनि एक सफल व्यवशायी बन्न इमानदारिता, लगनशीलता र मेहेनत जस्ता कुरा आवश्यक छन् । पहिलो प्राथमिकता चै आफ्नो लगानी भएको क्षेत्रलाई ध्यान दिएर काम गर्न सकियो भने सफल व्यवशायी बन्न सकिन्छ ।
इटहरीको सन्दर्भमा व्यवशायीका मुख्य समस्याहरु के–के रहेछन् ?
मेरो उद्योग वाणिज्य संघमा जाने पहिलो प्रयास हो । व्यवशायीहरुसँग घरदैलो कार्यक्रममा जाँदा घर भाडा, घरवहाल कर, आन्तरिक राजस्वबाट पनि व्यवशायीहरुलाई समस्या देखेँ । यस्तै यातायात तथा लेखा प्रणालीमा भएको असजिलोपन पनि महसुस गरेँ । यस्ता समस्याहरुको समाधानका लागि मेरो पहल रहनेछ ।
तपाइले जितेर गएपछि व्यवशायीको विकासका लागि के गर्नु हुन्छ ?
म जितेर गएको खण्डमा व्यवशायीलाई परेको साना तथा ठुला समस्याहरु समाधानार्थ मेरो टिमलाई साथ लिएर इटहरीलाई एउटा व्यवशायीक हव, निर्वाध रुपमा व्यवसाय गर्न सक्ने, स्वतन्त्र ढंगले व्यवसाय गर्न सक्ने थलोको रुपमा विकास गर्ने मेरो उद्देश्य रहेको छ ।
तपाइको प्रतिस्पर्धीभन्दा तपाई के कारणले सक्षम छु र जित्छु जस्तो लाग्छ ?
पहिलो कुरा त मेरो प्रतिष्पर्धी छन् जस्तो नि लाग्दैन मलाई । मैले विगत ६ वर्ष इटहरीमा रहेर व्यवशायीहरुलाई सेवा गरेको छु । जति मैले गरेको छु तेति अरुले गरेका छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । अहोरात्र खटेर जुन सेवा गरेको छु, त्यो इटहरीका व्यवशायीहरुले बुझ्नु भएको छ । त्यसैले मेरो प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ भन्ने नै लाग्दैन मलाई । त्यसकारण म यो निर्वाचनमा सफल हुन्छु जस्तो लाग्छ ।
इटहरीका २० वटा वडाहरुमा रहनु भएका उद्यमी व्यवशायीहरुमा हाम्रो टिमलाई अत्याधिक मत दिएर विजय गराउनुहोस् । तपाइहरुको मत खेर जाने छैन । तपाइका समस्याहरु हामी समाधान गर्नेछौँ भन्न चाहन्छु ।
purna dhimal kathamanduलेख्नुहुन्छ
बधाई छ भाइ राम्रोसँग चुनाबमा लागनु हाेला जितेर अघि कडनुहाेला